Malunga nathi -Linyi Mingding International Trade Co., LTD
Linyi Mingding International Trade Co., LTD, inkampani subsidi yeLinyi Mingding Group, leyo yenye yezona iinkuni ngobuchule ukusebenza oomatshini kunye nabathengisi iimveliso iinkuni e China, yasekwa ngo-2011. Kule minyaka yophuhliso, siye kumiselwa eyethu Inkqubo yokuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo yasemva kwentengiso.
Iimveliso zethu eziphambili ngomatshini osebenza ngomthi njenge-log debarker, umatshini oxobuka umthi, i-veneer stacker, i-grinder yesitshixo, isarha yokucheba umda, umqambi osisiseko kunye nomatshini oshushu kunye nezisombululo zemigca yokuvelisa njl.njl. , OSB njl.
Ngexesha leminyaka, sifumene izincomo ezininzi kakhulu kubathengi bethu. Eli lelona lungelo likhulu kuthi lokunceda abathengi bethu basombulule iingxaki zabo.
Iminyaka eli-10 yemveliso kunye namava okuthengisa
Umthengisi ophezulu woomatshini kunye neemveliso zeenkuni e-China
Iqela lethu lonke kubandakanya ukuthengisa kunye nenkonzo yasemva kwentengiso iya kugcina uthando lwethu lokwenza bonke abathengi banelise.Sifumene ukuthembela okukhulu kubathengi bethu, xa bedibana neengxaki ezithile kule ntsimi yeenkuni, akunamsebenzi koomatshini okanye iimveliso zeenkuni , bonwabile ukufumana iingcebiso okanye ukunikela kuthi. Le yinjongo yethu ngokunjalo: Xa sele singumthengi wethu, siya kuba ngabahlobo abalungileyo ngonaphakade.
Sisebenzisa ngokupheleleyo inkqubo esemgangathweni ye-ISO9001 kwaye sisebenzisa ngokungqongqo ukuhlolwa kathathu kwimveliso, oko kukuthi, ukuhlolwa kwezinto ezibonakalayo, ukuhlolwa kwenkqubo, kunye nokuhlolwa kwefektri; Iseti nganye yomatshini esiyilayisha kubathengi kufuneka badlulise ukulingwa kwetyala kumzi-mveliso wethu. Nayiphi na ingxaki kufuneka isonjululwe ngaphambi kokulayisha. Lo mgaqo ungqongqo usincedile senzela ukuba ngamnye wabathengi aneliseke ngomatshini esiwuthumele kubo. Zonke iimveliso ziveliswa ngokuhambelana neemfuno zomsebenzisi kunye nemigangatho yesizwe efanelekileyo, kwaye zenziwe ngezinto ezifanelekileyo zokwenza izinto kunye netekhnoloji ephezulu yokuqinisekisa ukuba umgangatho wemveliso, iinkcukacha kunye nokusebenza kuyahambelana neemfuno zomsebenzisi.
Sineearhente ezithile kumazwe ahlukeneyo, ezenza oomatshini bethu kunye neemveliso zisondele kubathengi bokugqibela. Oku kuqinisekisa abasebenzisi bethu bokugqibela ukuba bafumane emva kwenkonzo yentengiso ngexesha. Asizukukulahla kuba ukhetha ukuba sibe liqabane lakho kwishishini. Ndinqwenela ukwenza inkqubela ngakumbi kunye nani.